मुँहासे समस्या? जोगिनै पर्ने खानेकुरा | बेजिया
टोय टोरेस | 11/05/2022 20:00 | स्वास्थ्य सल्लाहहरू, पोषण
यदि तपाइँसँग मुँहासे समस्या छ भने तपाईले गर्नुपर्छ छालालाई बिगार्ने केही खानेकुराको उपभोग नगर्ने यी अवस्थामा। व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा, यो ती सबै खानेकुराहरू हुन् जसमा धेरै बोसो र भुटेको खाना हुन्छ। तर सूचीमा तपाईले खानाहरू थप्न सक्नुहुन्छ जुन हानिरहित लाग्न सक्छ, तर मुँहासेको छालाको ठूलो शत्रु हो। एक स्वस्थ आहार, जसमा छालालाई जोगाउने खानेकुराहरू समावेश हुन्छन् र यसलाई हानि गर्नेहरूलाई समावेश गर्दैन, मुँहासे विरुद्धको लडाईमा मुख्य उपकरणहरू मध्ये एक हो।
यद्यपि, छाला समस्याहरू प्राय: विभिन्न कारकहरूको कारणले गर्दा हुन्छ, जसको लागि यो स्वास्थ्य पेशेवरहरूको सहयोग लिनु आवश्यक छ। तसर्थ, आफ्नो छालाको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न आफ्नो आहारमा सुधार गर्नुको साथै, तपाईंले छाला विशेषज्ञकहाँ जानुपर्छ ताकि उसले तपाईंको समस्याको ठीकसँग विश्लेषण गर्न सकोस्। यति मात्र तपाईंले आफ्नो समस्याहरूको लागि उत्तम उपचार पाउनुहुनेछ मुँहासे को।
1 मुँहासेसँग लड्न कस्ता खानेकुराबाट बच्ने?
1.2 झोला खाजा
1.3 उच्च फ्याट खानाहरू
1.4 प्रशोधित मिठाईहरू
मुँहासेसँग लड्न कस्ता खानेकुराबाट बच्ने?
आहारबाट कुनै पनि खानेकुरा हटाउनु अघि, कुनै पनि पोषणको कमीबाट बच्न डाक्टरसँग परामर्श लिनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चिकित्सा नियन्त्रण बिना कुनै पनि प्रतिबन्ध स्वास्थ्य को लागी खतरनाक हुन सक्छ, त्यसैले यो आवश्यक छ सबै कुरा सामान्य रूपमा विकास हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नको लागि फलो-अप। यदि तपाइँको डाक्टरले तपाइँलाई जाने-अगाडि दिन्छ भने, तपाइँ केहि खानाहरू हटाउन सक्नुहुन्छ जसले मुँहासेलाई अझ खराब बनाउँछ।
भुटेको खानाहरू मुँहासेको सबैभन्दा खराब शत्रुहरू मध्ये एक हो, किनकि यस प्रकारको खाना पकाउन धेरै तेल र धेरै उच्च तापक्रम चाहिन्छ। यो बोसो खानामा गाढा हुन्छ, यसलाई फ्याट बममा परिणत गर्दछ यसले तपाईंलाई किलोग्राम बढाउँछ र छालाको समस्या भएकाहरूका लागि, एउटा गम्भीर समस्या जुन उल्लेखनीय रूपमा खराब हुन गइरहेको छ। खाना पकाउने अन्य हल्का तरिकाहरू छनौट गर्नुहोस्, एयर फ्राइर लिनुहोस् र कच्चा भर्जिन जैतूनको तेल उपभोग गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईले यो स्वस्थ खानाको सबै फाइदाहरूको पूर्ण फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
सबै प्रशोधित खाजामा छालाको अवस्था सहित स्वास्थ्यका लागि खतरनाक संतृप्त बोसो हुन्छ। चाहे ती चिप्स, स्टिक वा कुनै पनि झोला खाजा ढाँचाहरू, परिणाम एउटै छ। यस कारणका लागि, यदि तपाइँ तिनीहरूलाई नियमित रूपमा उपभोग गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई तपाइँको आहारबाट हटाउनु पर्छ, किनकि तपाइँको छाला परिवर्तन संग स्पष्ट रूपमा सुधार हुनेछ।
उच्च फ्याट खानाहरू
यदि तपाइँ मुँहासे नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ भने ती सबै खानाहरू जुन ठूलो मात्रामा बोसो समावेश गर्दछ सिफारिस गरिएको छैन। ती मध्ये छन् chorizo ​​यसको कुनै पनि संस्करणमा, बेकन, मक्खन वा धेरै बोसो भएको कुनै पनि प्रकारको मासु। तरकारी, फलफूल, दुबला प्रोटिन र फलफूल छनोट गर्नु उत्तम हुन्छ, जसले तपाईंको आहारमा आवश्यक पोषक तत्वहरू उपलब्ध गराउँछ र तपाईं लड्न सक्षम हुनुहुनेछ। छाला समस्या.
यदि तपाईंलाई मुँहासे नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भने औद्योगिक पेस्ट्रीहरू तपाईंको आहारको भाग हुनु हुँदैन। यी प्रकारका उत्पादनहरूले ठूलो मात्रामा समावेश गर्दछ संतृप्त बोसो र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक पदार्थ। तसर्थ, यदि तपाइँ कहिले काँही मिठाई छोड्न चाहनुहुन्न भने, यो प्राकृतिक सामग्री संग घर मा तयार गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
विशेष गरी अल्ट्रा-प्रोसेस गरिएका पिज्जाहरू वा ती फास्ट फूड रेस्टुरेन्टहरूबाट आउँछन्। यो उत्पादनले ठूलो मात्रामा बोसो समावेश गर्दछ धेरै सामग्रीहरूमा जसको साथ तिनीहरू तयार हुन्छन्, त्यसैले यो मुँहासे हेरचाहसँग असंगत सम्पूर्ण फ्याट बम हुन्छ। यदि तपाइँ कहिले काँही पिज्जा खान चाहानुहुन्छ भने, यसलाई घरमै कारीगरी तरिकाले तयार पार्नु राम्रो हुन्छ, स्वस्थ सामग्रीहरू छानेर।
छोटकरीमा, मुँहासे नियन्त्रण गर्न तपाईंले आफ्नो आहारबाट हटाउनु पर्ने खानेकुराहरू ती सबै हुन् जसमा धेरै बोसो हुन्छ र छोटकरीमा, तपाईंको स्वास्थ्यको लागि हरेक हिसाबले खतरनाक हुन्छ। यी उत्पादनहरूले अतिरिक्त किलो थप्छन्, धमनीहरू बन्द गर्नुहोस् र छाला समस्याहरू निम्त्याउँछ मुँहासे जस्तै। त्यसकारण, तिनीहरूलाई आहारबाट हटाउनाले तपाईंलाई मुँहासे सुधार गर्न मात्र मद्दत गर्दैन, तर यसले सामान्य रूपमा तपाईंको स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य सल्लाहहरू » मुँहासे समस्या? जोगिनै पर्ने खानेकुराहरु